भाग | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: भाग गर्दै
नमस्ते मान्छे किन लेख्न सक्दैन?
नमस्कार किन मान्छे लेख्दै छैन? समस्या भेटियो! तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ? २ Not होईन, र म एक्लै बस्न डराउँदिन। तपाईले आफैंलाई मूल्यवान् बनाउनु पर्छ। के यो गाउँको अन्तिम मान्छे हो? मैले गर्थे…
कृपया मलाई भन्नुहोस्, मलाई साँच्चै मद्दत चाहिन्छ! पूर्व-प्रेमीमा लेख्न के म भन्न सक्छु कि त्यो फिर्ता आउछ?
कृपया मलाई भन्नुहोस्, मलाई वास्तवमै सहयोग चाहिन्छ! मेरो पूर्व प्रेमीलाई फेरि आउन लेख्न के भनौं ?! उसको केटीलाई पर्खनुहोस्, ऊ फेरि आउनेछैन। तपाईंले अर्को मान्छे भेट्टाउनुहुनेछ, वा उसले तपाईंलाई भेट्टाउनेछ। यसको लायक छैन ...
Rasstovanii मा विभाजन मा केटी को भन्न को लागि?
बिदाको बेला केटीलाई अलविदा के भन्नु हुन्छ? मित्रहरू रहौं म तपाईको निर्णयलाई सम्मान गर्दछु र तपाईलाई खुशीको चाहान्छु र एक व्यक्ति भेट्छु जसले तपाईलाई म जस्तो माया गर्छ। उसलाई भन त ...
क्रिस्टिना र दानियाले राम्रो-स्वभाविक भाग कस्तो गर्नुभयो?
क्रिस्टिना र डान्या राम्रो स्वभावको किन बिच्छेद भयो? केही अपरिचित व्यक्तिहरूको बारेमा मूर्ख प्रश्नहरू सोध्नुको सट्टा, मैले स्मार्ट पुस्तकहरू पढे भने राम्रो हुन्छ !!! तपाईंले उनीहरूलाई किन उनीहरूले सोध्नु पर्छ ...
किन पतिनले आफ्नी पत्नीलाई विवाह गरे?
पुतिनले आफ्नी श्रीमतीलाई किन सम्बन्धविच्छेद गरे? शायद कुनै प्रकारको अर्को PR ...। उहाँ मर्नुभयो ... र अब एक दोहोरो किनभने ढालमा आध्यात्मिकता tm उठाउनेहरू, एक नियमको रूपमा, आफैंमा आध्यात्मिकता छ ...
मैले मेरो साथीको छोरा कसरी सोधेँ?
एक साथीको छोरो संग सुत्नुभयो के गर्ने? एक वेश्या ... केहि नगर्नुहोस्, उसको आकर्षण बित्नेछ, र थोरै पनि होइन, उसले आफैंले सबै कुरा बुझ्दछ। ..यो दुखको कुरा हो कि मेरी आमाले ...
तपाइँलाई तपाइँको प्रेमीलाई बिदाई पत्र कसरी मनपर्दछ? ...
तपाइँलाई तपाइँको प्रेमीलाई कसरी विदाई पत्र मनपर्दछ? ... आँसु सामान्य रूपमा। तपाईं जवाफ लेख्नुहोस् ताकि उहाँ त्यसबाट एक शब्द कहिल्यै बिर्सनु हुन्न, ताकि उहाँ सधैं तपाईं समक्ष पुग्नुहुनेछ। यो स्पष्ट छैन कि यो होइन ...
कसलाई अनुवाद थाहा छ - अस्ता ला भिस्टा?
कसलाई अनुवाद थाहा छ - अस्ता ला भिस्टा? अलविदा भूमि यो स्पेनिशमा छ - तपाईंलाई ... राम्रोसँग, शाब्दिक रूपमा भने, त्यसपछि: "दृश्य" सम्म तपाईंलाई भेट्ने, अलविदा, तपाईंलाई Asta la Vista अलविदा हेर्नुहोस् ...
यो बेवकूफ हो, तर पुरुषहरू मेरो ध्यानमा ध्यान दिदैनन्। र म अति बृद्धि छैन!
यो मुर्ख हो, तर पुरुषहरू सबैमा ध्यान दिँदैनन्। र म बढाइचढाइ गरीरहेको छैन! हुँने सक्दैन! त्यसोभए एक जना केटीले ध्यान दिएनिन ?? ? मलाई तिम्रो तस्विर पठाउ…
विभाजनको बारेमा उत्तम गीतहरू। तपाईंका विकल्पहरू
बिदाइको बारेमा उत्तम गीतहरू, दुखाइ। तपाईका विकल्पहरू मिखाइल र इरिना क्रुग "मेरो प्रेमलाई नत्याग्नुहोस्" हल्का-बाधित जीवन, महिमा-प्रेमको खातिर, विश्वास गर्नुहोस् र पर्खनुहोस्, Ntl-टूट हार्दिक, पोटाप र Kamenskikh- तपाईं किन मौन हुनुहुन्छ, स्प्लिन-प्लास्टिक ...
सल्लाह !!! आफ्नो जन्मदिन को दिन मा आफ्नो पूर्व प्रेमी को बधाई दिइयो जो एक नयाँ जुनून को जन्म दिए ???
सल्लाह !!! तपाइँको पूर्व प्रेमीलाई बधाई कसरी दिने जसको जन्मदिनमा नयाँ जोश देखा पर्‍यो ??? तपाईंको जीवनमा नयाँ वर्ष! ऊ कुनै कठिनाईविना हुन सक्छ, आनन्द केवल तपाईंलाई दिन्छ, एक मुस्कान बिना ...
कसले उजुरीको साथ भेट्यो? उनीहरु रूसी महिलाहरु संग सम्बन्ध मा के हुन्? के तिनीहरू विश्वास गर्न सक्छन्? हिँड्नु
उज्बेकसँग को भेट भयो? तिनीहरू रूसी महिलाहरूसँगको सम्बन्धमा कस्तो हुन्छन्? के तिनिहरुलाई विश्वास गर्न सक्छौ? हिड्दै इरिना म रूखो हुन चाहन्न, तर जब तपाइँको पति वा प्रेमीले तपाइँलाई अन्तिम फूल दिए ...
तपाईंको प्रिय पतिको मृत्यु पछि जीवन कसरी सुरु गर्ने?
कसरी आफ्नो प्रिय पतिको मृत्यु पछि बाँच्न सुरु गर्ने? जे भए पनि तपाईंको लागि कत्ति गाह्रो छ, जीवन चलिरहन्छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ह up्गअंगमा पर्नु हुँदैन, अधिक संचार हो, किनकि समय निको पार्ने सुरुवातको लागि तपाईलाई आवाश्यक हुन्छ।
विभाजनको बारेमा बुद्धिमानी शब्दहरू
आफ्नो प्यारो संग बिच्छेद गर्ने बारे बुद्धिमान् शब्दहरु संग भाग छैन! ... हामी आकाश मा हेर्न भूल, हाम्रो खुट्टा मुनि डामर नोटिस ... हामी सयौं आँखा मा हेर्छौं, आवश्यक को रंग को बिर्सदै ... हामी तस्विरहरु फाल्छौं, यो महसुस गर्दै कि छविहरू रहनेछ ...
मलाई कसरी थाहा छ यदि एक केटाले मलाई माया गर्दछ?
केटाले मलाई माया गर्छ भने कसरी थाहा पाउने ?? हम् माया र आनन्द लिनुहोस्। बच्चाहरू, कस्तो माया? मैले बुझें कि म गर्न चाहन्छु तर वास्तवमै, अब सिक्ने समय हो! कस्तो प्रकारको केटा त्यो उमेर मा हुन सक्छ ...
क्षेत्र क्षेत्रमा तपाईंको प्रियमा। कृपया
जोन विकल्पहरूमा तपाईंको प्रियजनलाई पत्र। कृपया, न्यानो भए पनि, ताकि कुनै व्यक्तिले महसुस गरे कि उसको सम्झिएको छ, तिनीहरू घर पर्खिरहेका छन्। तिमीलाई कस्तो छ? हो, ऊ गरीब चीज हो, ऊ बसिरहेको छ। खैर, मैले चेनीब लुटें ...
एक प्यारी हृदयघाती पदमा तपाईंको प्रिय मान्छेलाई लेख्न मद्दत गर्नुहोस्?
मलाई तपाईको प्रिय प्रेमीका लागि हृदय विदारक अलविदा पद लेख्न मद्दत गर्नुहोस्? उहाँलाई यी पदहरू ताराहरूको लागि, राम्रो नयाँ फेला पार्नुहोस्, यसले उसलाई दु: खी विचारहरूतर्फ डो .्याउँछ। मैले बचत गरेन, मैले यो बचत गरेन, मैले यसलाई दिएँ र गुमाए पनि मेरो पूरै जीवन ...
पूर्व केटीलाई एक पत्र पत्र पठाउन अन्तिम रेखाको संक्षेपमा सारियो। अक्षर बाहिर छ, म साँच्चै उसलाई लेख्न चाहन्छु, तर यो यसको लायक छ ???
मैले मेरो पूर्व प्रेमिकालाई विदाई पत्र पठाएर यसलाई सारें। चिठी vn, म वास्तवमै उनलाई लेख्न चाहान्छु, तर के यो लायक छ ??? उसलाई जान दिनुहोस् - यदि यो तपाईंको प्रेमिका हो भने, उनी आफ्नै राम्रोमा फर्केर आउँछिन् ...
मैले प्रश्न सोध्न सक्दिन कि म प्रश्न सोध्न सक्छु?
मलाई मन पर्ने केटालाई के प्रश्नहरू सोध्न सक्छु ?? यहाँ केटीको लागि प्रश्नहरूको सूची छ। तपाईंलाई कुन फिल्म मनपर्छ? तपाईको मनपर्ने चलचित्र के हो? (व्यक्तिगत) तपाईंलाई कस्तो प्रकारको संगीत मनपर्दछ? के तपाईंलाई क्लबहरू मनपर्‍यो? केको लागि ...
हिजो मेरो श्रीमतीले मलाई छोड्यो। सल्लाह कसरी लामो समयसम्म बाँच्न सकिन्छ? मैले के गर्नु पर्छ?
मेरी श्रीमतीले मलाई हिजो छोड्नुभयो। कसरी अप्ठ्यारोमा पुग्न सल्लाह दिनुहुन्छ? के गर्ने? तल बस्नुहोस् र आफ्नो मुट्ठीमा अब स्नट राख्नुहोस्, किनकि तपाईं केको लागि लड्नुभयो - यहीमा तपाईं दौडनुभयो। पहिले, तपाईंले सोच्नु पर्ने थियो ...
56 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,177 प्रश्नहरू।